Wararka Maanta: Arbaco, Dec 19, 2012-Askari ka tirsan Ciidamada dowladda oo sarkaal ku dhaawacay Afaafka hore ee Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya
Sarkaalka la dhaawcay ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyay Ibraahim Iidoow wuxuuna ka mid ahaa sida la sheegay saraakiisha madaxtooyada, lamana oga sababta keentay in askariga uu dhaawac u geystay, balse warar ayaa sheegaya in intii falka uusan dhicin uu muran dhexmaray askariga iyo sarkaalka la toogtay.
Dhaawaca sarkaalka ayaa loo qaaday goobaha caafimaadka, iyadoo goobta uu ka dhacay falka ay gaareen ciidammo ka tirsan kuwa dowladda, inkastoo askarigii falka geystay uu markiiba goobta ka baxsaday.
"Askariga rasaas badan ayuu ku furay sarkaalka, markiina goobta ayuu ka baxsaday isagoo qorigiisa wata," ayuu yiri goobjooge ku sugnaa meel ku dhow halka uu falku ka dhacay oo saxaafadda la hadlay.
Wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in sarkaalka la dhaawacay uu ka mid ahaa saraakiisha xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, balse ma jiro hadal kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlmaanka, kaasoo ku aaddan dhaawaca loo geystay sarkaalka.
Dhaawaca sarkaalka ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo dhawaan uu askari ka tirsan ciidamada dowladda dhaawac ugu geystay Muqdisho taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka, Jen. Cali Xirsi Barre (Cali-gaab).